Life in Fukuoka "Nepali" Vo.61
समुन्द्र कुमार थापा
(Kyushu University मा विद्यावारिधिमा अध्यनरत Graduate School of Information Science and Electrical Engineering)
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.60
【सोरामामे अर्थात् बकुला】
बकुला जापानभरि उब्जाईने तरकारी हो। फसलको समय, मार्चदेखि जुनसम्म लामो हुन्छ। त्यसकारण, shigatsu-mame, gogatsu-mame, र natsu-mame भनेर ठाउँ अनुसार नाम पनि फरक छ।
यो हरियो, ताजा स्वादको र गर्मीको शुरुवातमा खाने उत्तम खाना हो।
जापानमा भने प्रायःजसो यसलाई नुनपानीमा उमालेर खाने गरिन्छ। यो स्न्याक्सको रूपमा बियरसँग धेरै जम्छ।
यस बाहेक, वास्तवमै भन्ने हो भने ताजा बकुला, काँचै पनि स्वादिष्ट हुन्छ।
सुपरमार्केटमा बकुला देख्नुभयो भने, किनेर जापानी तरिकाले नुनपानीमा उमालेर खाएर हेर्दा कसो होला त?
【हलुका सवारी साधन कर सम्बन्धि】
यदि तपाईंसँग मोटरबाईक वा हलुका कार छ भने, हुलाक मार्फत कर तिर्नका लागि सूचना आउन सक्छ, अवश्य पनि भित्र हेर्नुहोला। मे को ३१ सम्ममा कोन्भिनी, बैंक वा हुलाक मार्फत तिर्नुहोला।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.59
जापानी भाषा（日本語） , अन्य（その他）
तपाईंहरुले कहिल्यै Satsuki-bare शब्द सुन्नुभएको छ?
Satsuki-bare भन्नाले तपाईंहरुले मेको स्फूर्तिदायी मौसमको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
ताजा हरियाली भई, न जाडो न गर्मी, आर्द्रता पनि नभई, बस्न सहज, घमाइलो दिन।
यद्यपि यो वास्तविक अर्थ नभई, लुनार क्यालेन्डरमा मे महिना वर्षायामको समय भएको, र Satsuki-bare भन्नाले, वर्षायामको घमाइलो दिनलाई जनाउँदछ।
फरक अर्थ लाग्ने चीजहरू क्रमिक रुपमा स्थापना हुनु असामान्य कुरा नभई, अब जापानी शब्दकोशमा दुवै अर्थहरू राखिएका छन्।
【इलेक्ट्रोनिक पुस्तकालय खोल्ने सम्बन्धि】
〇फुकुओका सिटि सार्वजनिक पुस्तकालयले इलेक्ट्रोनिक पुस्तकहरू सापटमा दिन शुरू गरेको छ।
इलेक्ट्रोनिक पुस्तकहरू, पुस्तकालयमा नगईकन पनि, कम्प्युटर वा ट्याब्लेट, स्मार्टफोन, इत्यादिबाट अनलाइनमा पुस्तकहरू सित्तैमा सापटी लिएर पढ्न मिल्ने सेवासुबिधा हो।
उपन्यास, इतिहास, स्वास्थ्य, परिकार आदि सम्बन्धि चित्र किताबहरू, लगभग ७,००० वटा जति पुस्तकहरू सापट लिन सक्नुहुन्छ।
केही पुस्तकहरु शब्द वाचन सुबिधा भएका तथा केही पुस्तकहरु ठूलो अक्षरमा पढ्न सकिने पनि छन्।
यस सुबिधाको प्रयोगकर्ताहरु भन्नाले, शहरभित्र बसोबास गर्ने, साथै शहरभित्र काम गर्ने वा स्कूल जानेहरु पर्दछन् र यसलाई प्रयोग गर्नका लागि "फुकुओका सिटि सार्वजनिक पुस्तकालय सापटी कार्ड" चाहिन्छ।
कार्ड नभएका, म्याद सकिएका, वा शहर बाहिरबाट काम गर्ने वा स्कूल जानेहरुले, कृपया फुकुओका सिटी सार्वजनिक पुस्तकालय वा प्रत्येक वार्डको शाखा पुस्तकालय, AMIKAS पुस्तकालयमा दर्ता गर्नुहोस्।
२ हप्तामा ३ वटा पुस्तकहरू सापट लिन सक्नुहुन्छ। यो म्याद सकेपछि स्वचालित रूपमा फिर्ता हुनेछ।
सामान्य जापानी भाषाको चित्र पुस्तक र अंग्रेजीको पुस्तकहरू पनि भएकोले, जापानी भाषा पढ्दै हुने महानुभाव वा विदेशी भाषाका पुस्तकहरू पढ्न चाहनुहुने महानुभावहरुले अवश्य प्रयोग गरेर हेर्नु होला।
【खोपका लागि शंकास्पद कलहरूबाट सावधान हुनुहोस्】
नयाँ कोरोना भाइरस खोपका लागि आवश्यक छ भन्दै, पैसा र व्यक्तिगत जानकारी लिई ठग्ने हेतुले आउने टेलिफोन कल सम्बन्धि परामर्श, उपभोक्ता मामिला विभागमा पठाईने गरिएको छ।
"कोरोना भाइरस खोप लिन सकिन्छ। पछि पैसा फिर्ता हुनेभएकोले, कृपया पैसा ट्रान्सफर गर्नुहोस्।" भनेर आफूलाई स्वास्थ्य केन्द्र भनि आउने फोन वा "नि:शुल्क कोरोना भाइरस खोप लिन सकिने" भनेर व्यक्तिगत जानकारीको लागि सोध्ने संदिग्ध कल आएको पाईन्छ।
नगरपालिकाहरूले खोपका लागि फोन वा ईमेल मार्फत् पैसा वा व्यक्तिगत जानकारीको लागि अनुरोध गर्दैनन्।
खोप निःशुल्क हो। साथै, तपाईले नगरपालिकाबाट हुलाक मार्फत् "खोपको सूचना" प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कृपया शंकास्पद फोन कल र ईमेलप्रति सावधान रहनुहोस्।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.58
मेको दोस्रो आइतवार "मातृ दिवस" । मातृ दिवस अमेरिकामा शुरू भएको पर्ब मानिन्छ।
गृहयुद्धको क्रममा, Ann Jarvis नाम गरेकी एउटी आइमाईले, विद्रोही र समर्थक केही विचार नगरी, घाइते सेनाहरूको सरसफाईमा सुधार गर्नका लागि "Mother's Day Work Club" को स्थापना गरेका थिए। उनको मृत्यु भएको दुई बर्ष पछि, उनकी छोरीले आफ्नी आमाको लागि स्मारक र्याली निकाली Ann लाई मन पर्ने सेतो कार्नेशन फूल वितरण गरेका थिए।
जापानमा पनि सन् १९१५ देखि मातृ दिवस फैलियो।
रातो कार्नेशन "आमालाई माया" र "आमाको माया", सेतो कार्नेशन "मृत आमालाई सम्झना" जस्ता फूलका शब्दहरू छन्।
हामी नेपालीहरुको आमाको मुख हेर्ने दिन, आउने मंगलबार परेको छ I तपाईंहरुले पनि त्यस दिन आफ्नो आमालाई फोन गर्नुहुन्छ होला I विदेशमा भए पनि, आजकल भिडियो कलको सुबिधा भएकोले आमाको मुख हेरेर कुरा गर्न सजिलो, अनि रमाइलो भएको छ नि है !
【Japanese Chatting Event・प्रसाशनिक वकिलद्वारा परामर्शको सूचना】
फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको सूचना रहेको छ।
के तपाईंहरुलाई हरेक महिनाको एक पटक आयोजना हुने " Japanese Chatting Event "को बारेमा थाहा छ?
Zoom प्रयोग गरेर, विदेशी विद्यार्थीहरू र जापानी स्वयंसेवकहरू बिच प्रत्यक्ष वान् टु वान्, साथै सानो समूहहरूमा मनपर्ने विषयवस्तुहरूमा छलफल गरिन्छ । हरेक दिन, स्कूलमा सिकेको जापानी भाषा प्रयोग गर्न चाहनुहुने वा जापानीहरूसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुने महानुभावहरु, अवश्य पनि सहभागी हुनुहोला। सहभागिता शुल्क नि:शुल्क हो।
〇 आवासको स्थिति र आवास अवधिको बारेमा, तपाईले केही कुरा नबुझेको छ कि?
फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा हरेक महिनाको दोस्रो आइतवार, दिउँसो प्रसाशनिक वकिलद्वारा निःशुल्क परामर्श प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
परामर्श गोप्य राखिने भएकाले, यसलाई प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
बैठक र परामर्शको समय तथा बुकिंगको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कृपया फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको होमपेज वा फोन नम्बर ०९२-२६२-१७९९ मा सम्पर्क राख्नुहोला।
【निहोंगो Class Map को बारेमा】
फुकुओका शहरमा, स्वयंसेवक शिक्षकहरूले सिकाउने जापानी भाषा कक्षाहरू धेरै छन्।
प्रत्येक कक्षाको स्तर, सहभागिता शुल्क, सामग्री आदि जानकारी "निहोंगो Class Map" मा प्रदान गरिएको छ।
प्राथमिक कक्षाहरुमा बिस्तारै अध्ययन गर्ने, खान्जीको अभ्यास गर्ने कक्षाहरु पनि छन् , जापानी संस्कृति सिक्ने र जापानी भाषा पढ्दै रमाईलो संस्कृति आदानप्रदान गर्ने कक्षाहरु पनि छन्।
"फुकुओका सिटि निहोंगो Class Map" मा हेरेर, नजिकको जापानी भाषा कक्षा खोजी हेर्नुहोला।